ऋण लिनेलाई ब्याजदर अझै सस्तियो, कुन बैंकको बेस रेट कति छ ? – Dainik Samchar
ऋण लिनेलाई ब्याजदर अझै सस्तियो, कुन बैंकको बेस रेट कति छ ?
August 24, 2021 207
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तमा यी बैंकहरुको बेस रेट ८ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको थियो। यो घटेर २०७७/८ को असार मसान्तसम्म ६ दशमलव ८९ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुले बेस रेटमा केही प्रतिशत जोडेर आफ्नो ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
कर्जाको व्याजदर निर्धारणमा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तत्वहरु समावेश गरी गणना गरिएको दर नै आधार दर (बेस रेट) हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिष्पर्धी र पारदर्शी गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक आधार दर प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बेस रेटमा कति प्रिमियम जोड्ने भने बैंकहरुलाई नै अधिकार दिने उल्लेख गरेको छ। तर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम् २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
ऋण लिदा सबैभन्दा सस्तो सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रि वाणिज्य बैंकको बेस रेट असरा मसान्तसम्म ५ दशमलव ४१ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस बैंकको बेस रेट ५ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको थियो।
बेस रेट कम हुने दोस्रो नम्बरमा स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक देखिएको छ भने तेस्रो नम्बरमा मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंक देखिएको छ। स्टाण्डर्ड चार्डड बैंकको अघिल्लो वर्ष ७ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको बेस रेटलाई घटाएर ५ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झारेको छ ।
तेस्रो नम्बरमा देखिएको नेपाल बैंकको बेस रेट ६ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झरेको छ। चौथो नम्बरमा देखिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७ दशमलव ५१ प्रतिशमा रहेको बेस रेट घटाएर ५ दशमलव ७४ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ। मूनाफामा नम्बर वान नविल बैंकले पनि बेस रेटमा सुधार गरेको छ। अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा ७ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको बेस रेट ५.८६ मा नबिलले झारेको छ।
कुन-कुन बैंकको बेस रेट कति छ ?
Prevउपत्यकामा राति ८ बजेपछि पनि सवारी सञ्चालन गर्न पाइने
Nextफेरी मलेसियामा को’रोना सक्र’मणवाट एक नेपालीको मृ’त्यु- हार्दिक श्रंदान्जली
दुःखद खबर: डोटीको सेती नदीमा डु’बेर इञ्जिनीयरिङ पढ्दै गरेका किशोरको मृ,त्यु ;
पुजा शर्माले आकाशलाई अर्को प्रेमिका छ भनेपछि पूजाको शिरमा हात राखेर आकाशले खाए यस्तो कसम(हेर्नुहोस भिडियो)
९ महिनाको बच्चा हुर्काउदै गोर्खाको एउटा कोठामा के भयो हेर्नुहोस (भिडियो)